Umlawuli we-WordPress: Imisebenzi nokunye ▷➡️ eltecnoanalista
I-WordPress Admin: Izici nokunye
Iphaneli yokulawula, ejwayelekile ye wordpress admin, evame ukubizwa ngokuthi i-WP Admin, iyindlela ongaphatha ngayo iwebhusayithi yakho. Kuyo ungenza izenzo eziningi ezihlukahlukene, njengokudala nokucubungula okuqukethwe kwekhasi, phakathi kwezinye izinto. Uma ufuna ukwazi ukuthi ukufinyelela kanye nemisebenzi kunjani, kulesi sihloko uzobona konke odinga ukukwazi.
Ungangena kanjani ku-WordPress Administrator?
para finyelela i-WordPress admin vele ungeze i-/wp-admin ngemva kwekheli lekhasi lakho lokufaka noma i-URL. Uma wenza le nqubo ngendlela efanele, isiphequluli sizokukhombisa ibhokisi esikrinini sakho lapho uzocelwa khona igama lomsebenzisi nephasiwedi yokufinyelela, okumele ukwenze nje ukubanikeza ukuthi bafake umlawuli.
Kunconywa ukuthi uguqule ikheli lokungena elizenzakalelayo, njengoba noma iyiphi i-bot, i-hacker, kanye neskripthi kuzoskena i-URL evamile. Ngokuyilungisa, uzokwazi ukunciphisa inani elibalulekile lemizamo yokufaka i-akhawunti yewebhusayithi okungeyakho. Kunoma yikuphi, cabanga ukuthi lesi akusona isixazululo esiqondile senkinga, kodwa kuyindlela enhle yokwandisa ukuphepha kwakho.
Kubalulekile futhi ukuqaphela ukuthi idatha evela Ukufinyelela kwe-WordPress zinqunywa kunqubo yokufaka. Ngenxa yalokho, igama-mfihlo labo alifani naleli elikuphaneli yakho yokulawula yokuba usokhaya.
Ngakolunye uhlangothi, i-WordPress ivamise ukufakwa empandeni yesizinda sakho, etholakala kufolda ye-html yomphakathi ye-akhawunti. ukusingathwa lokho kungokwakho
Ezinye Izindlela Zokungena
Ngaphezu kwalokhu osekushiwo, ungaba nezinye izindlela zokufinyelela i-akhawunti yakho yesayithi le-WordPress. Lokhu okulandelayo:
Gcina isixhumanisi sokungena sekhasi lakho ngaphakathi kwebha yamabhukhimakhi. Ungakwenza lokhu ngokucindezela izinkinobho ze-CTRL+D. Enye indlela iwukuba uye ngqo ethuluzini eshiwo ngenhla bese uchofoza gcina leli khasi.
Faka i-URL yokungena ye-WordPress kumenyu yekhasi lakho. Ukuze wenze lokhu, iya ku-akhawunti yakho, chofoza okuthi Ukubukeka futhi nakunkinobho Amamenyu, ozokhetha kuyo oyifunayo. Bese uya ku Engeza izinto zemenyu bese ukhetha inketho Izixhumanisi ngokwezifiso, okumele unikeze kuphela ulwazi olucelwe uhlelo.
Izimbangela ezivimbela ukungena kanye nezixazululo zazo
Kungenzeka ukuthi nakuba ulandele imiyalelo yangaphambilini uyifaka kanjani i-wordpress, ibhokisi lapho uzohlinzeka khona igama lakho lomsebenzisi nephasiwedi aliveli. Kunezizathu ezimbalwa ezingenza lokhu kwenzeke:
Ukuthi iwebhusayithi yakho ayiphathwa nge-WordPress. Ungahlola leli cala ngokulayisha ikhasi lakho. Ukwenza lokhu kufanele ubeke ikhesa endaweni engenalutho bese uchofoza inkinobho yegundane engakwesokudla. Ngemuva kwalokho kuzovela uchungechunge lwezinketho, ozokhetha kuzo Bona ikhodi yomthombo. Uma unalokhu uzobona umbhalo wesayithi ku-HTML. Manje kufanele ubone ukuthi ifolda ye-wp.content ikhona yini, lapho-ke, ingosi yakho yadalwa ngeplatifomu.
Elinye icala kungaba ukuthi isendlalelo esengeziwe sokuvikela sonakalisiwe. Kungase kube nezizathu ezihlukene zalokhu, njengokufakwa kwe-plugin eklanyelwe ukuthuthukisa izivikelo ze-WordPress noma ukwenza izilungiselelo ezithile kuseva lapho ikhasi lakho lisingathwa khona, phakathi kwezinye izinto. Kunoma ikuphi, kufanele uxhumane nomuntu oklame iwebhusayithi yakho. Uzokwenza lokhu ukuze ikunikeze ulwazi oludingayo ukuze ukwazi ukuqhubeka kanjani.
Izici kanye nezinzuzo ze-WordPress Admin
Isikhathi sokuqala ufaka iphaneli yokuphatha, uzobona esikrinini sakho isayithi elizenzakalelayo ne amawijethi ku-wordpress, njengomsebenzi, okusalungiswa okusheshayo, kanye nemicimbi nezindaba ezivela endawenikazi. Ndawonye, ​​uzobona yonke imininingwane nezinto zekhasi lakho.
Ngaphandle kwenzuzo yokubuka isikrini esizenzakalelayo, into evamile kuzoba ukuthi usebenzisa ikakhulukazi ezinye izindawo zephaneli yokuphatha yesikhulumi.
Uma ufuna ukufinyelela lezi zindawo zephaneli, unamandla okusebenzisa izinketho ezihlukene kumenyu engakwesokunxele kwesikrini.
Emsamo kunezinhlobonhlobo ezinhle zokukhetha ezihlelwe ngokuzenzakalelayo. Kodwa-ke, ezinye izingqikithi nama-plugin nazo zingangezwa, ngakho-ke kungenzeka ukuthi uzoqaphela ukuhlukahluka kwakho kuwebhusayithi yakho ye-WordPress.
Isibonelo esihle salokhu kungaba Inqolobane ye-Kinsta, esiza amakhasimende ukuthi alawule ngokuzenzakalelayo ukugcinwa kwesikhashana kweleveli yeseva owangezela wona. Ngaphezu kwalokhu, kuneminye imisebenzi ongayenza ngayo phatha i-wordpress nokuthi sizohambela kabanzi ngezigaba ezilandelayo.
Yenza Okuthunyelwe Kwebhulogi
Uma wenza i-athikili ukuze uyishicilele kubhulogi yakho ngeplatifomu, umlawuli we-WordPress uzoqondisa inqubo ngezindlela ezahlukene.
Enye yezindlela indawo yomqondisi we-WordPress ekusiza ngayo ukuhamba phezu kwe Amathikithi, etholakala kumenyu ohlangothini lwesobunxele lwesikrini. Ngalokhu, ezinye izinketho zemenyu engezansi ehambisanayo zizovela, lapho uzokhetha khona eyodwa yazo Faka okusha.
Ngale ndlela uzobe uvula isigaba endaweni yesikhulumi ukuze udale ukushicilelwa okusha, faka isihloko, ubhale okuqukethwe kwakho kusihleli sombhalo, engeza izithombe, unikeze izigaba nezinye izenzo.
Phatha Idizayini Yewebhusayithi
Ukulawulwa kokuphathwa komklamo wesithombe esinawo isayithi lakho nakho kungenye inzuzo indawo yokuphatha ekunikeza yona, uma uyisebenzisa njengethuluzi laleyo njongo. Ungakwenza lokhu ngokukhetha nokwenza izingqikithi ngendlela oyifisayo.
Ukuze usebenze ngezindikimba ze-WordPress, okumele ukwenze ukubeka ikhesa entweni yemenyu Ukubukeka. Lokhu kuzokwandisa inani lezinketho.
Ezinye Izici Nezinzuzo
Ngaphezu kwalokhu okungenhla, kumenyu yomqondisi we-WordPress ungathola eminye imisebenzi engaba wusizo kakhulu kuwe. Ngabo unamathuluzi adingekayo okuphatha ukubukeka kwewebhusayithi yakho, njengokucushwa kwama-plugin nabasebenzisi. Uphinde uthole uhlelo ukuze izivakashi zikwazi ukuphawula ngokuqukethwe kwakho, phakathi kwezinye izinto.
Isakhiwo Sephaneli kanye Nezilungiselelo Zomsebenzi
Ungathembela kusethi yezindlela ozokwazi ngazo ukumisa imisebenzi ehlukene kanye nokwakheka kwephaneli yokuphatha ye-WordPress.
Okunye ukucupha ongakwenza ukufihla lezo zakhi ongazisebenzisi futhi ezephaneli yokuphatha. Ngalokhu uyakwazi ukukhawulela amathuluzi kulawo athi ikakhulukazi, akwethule ngosizo olukhulu.
Ukuze ufihle lezi zakhi, okumele ukwenze ukubeka ikhesa ohlangothini olungaphezulu kwesokudla semonitha, enkinobho Izinketho zokubonisa bese uchofoza kukho. Ekugcineni, kufanele uqhubeke nokukhipha ichashazi eliluhlaza okwesibhakabhaka elibekwe ezintweni noma amathuluzi ofuna ukuwafihla.
Ngakolunye uhlangothi, ungaphinda ulungiselele amavoti ombala kuphaneli yokuphatha. Lokhu kuyindawo yobuhle neyokuhlobisa, unethuba lokushintsha uhlelo lwangempela lombala.
Ungamisa isethi yemibala ngokuya esigabeni se Abasebenzisi, lapho-ke Iphrofayili yakho futhi ekugcineni kufanele ukhethe ivoti elisha lomlawuli.
Iphuzu lokugcina ongalisho ukuthi kungenzeka uthole ama-plugin wakho we-WordPress, ongasebenzisa ngawo izingqikithi zokuphatha ukuze wenze izinguquko ezithuthukile zesitayela.
Ezinye izilungiselelo ku-WordPress Admin
Ngokungeziwe kuzilungiselelo esezishiwo, kukhona okunye ukwenza ngokwezifiso ongakwenza kuphaneli yokuphatha ye-WordPress, okuyilezi ezilandelayo:
Shintsha noma fihla izinketho namathuluzi kumenyu yokuphatha.
Hlela yonke into ngendlela yakho ngokuhudula nokuwisa ngekhesa.
Fihla ibha yamathuluzi noma uyifihle kulabo abangebona abalawuli kuphela.
Beka futhi uthintane namalogo nemibala ehlukene kuphaneli yokulawula.
Enza ngendlela oyifisayo amamenyu ahlukene ngendlela othanda ngayo.
Mayelana nokunye ukucushwa okukhulunywe ngakho, siphakamisa ukuthi uthintane nama-plugin alandelayo ahlobene nawo:
Umhleli Wemenyu Yomlawuli
Umphathi Wezifiso Oyikhazikhazi
Ibha yamathuluzi e-WordPress
Ibha yamathuluzi ye-WordPress iyona ongayithola phezulu kwesikrini, kungaba kunguqulo ebukhoma yewebhusayithi yakho noma uma ubheka umlawuli weplathifomu, ngemva kokufaka i-akhawunti yakho.
Labo bafundi noma amakhasimende afaka isayithi lakho ngeke akwazi ukubona ibha yamathuluzi. Nokho, uma kwenzeka ufake ikhasi nge-akhawunti yakho ye-WordPress, uzobona inkinobho ehambisanayo phezulu kwesikrini.
Kubha yamathuluzi ungathembela ezinkethweni ezihlukahlukene zemenyu ukwenza izinqubo ezihlukene, ungacabangeli indawo yazo kusayithi lakho.
Ngakolunye uhlangothi, kubalulekile ukuqaphela ukuthi ungakhubaza izici zebha yamathuluzi ye-WordPress. Ukuze wenze lokhu, mane nje uye esigabeni ku Abasebenzisi bese uchofoza inkinobho Iphrofayili yakho. Uma usukwenzile lokhu, uzodinga kuphela ukususa ukumaka inketho ehambisanayo.
Idizayini Yewebhu Ephendulayo: Iyini? Ungayithola kanjani? futhi nokuningi
Buyekeza i-WordPress Mathupha: Isinyathelo ngesinyathelo
Yenza kusebenze i-SSL ku-WordPress: Uyenza Kanjani Ngokufanelekile?